Nepali Rajneeti | प्रधानमन्त्रीलाई छातीमा हात राखेर सो’च्न सभापति देउवाको सुझाव
प्रधानमन्त्रीलाई छातीमा हात राखेर सो’च्न सभापति देउवाको सुझाव
बैसाख २७, २०७८ सोमबार ३९० पटक हेरिएको
काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले अरुमाथि दो’ष थुपारेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भाग्न नपाउने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको विशेष बैठकमा दलका तर्फबाट धारण राख्दै सभापति देउवाले अहिले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था कसका कारणले आएको भन्दै प्रश्न गरे ।
उनले संविधानले व्यवस्था गरेको लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा चलेको छ ? सरकार सञ्चालनको जिम्मा लिएकाहरुबाट संविधान सुरक्षित छ ? भनेर प्रश्न गरे ।
उनले झण्डै दुई तिहाइ गठबन्धनबाट यो सरकार बनेको भन्दै आज विश्वासको मत माग्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै ‘यसका लागि को जिम्मेवार छ ? संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई कार्यकारी अधिकार दिएपनि प्रधानमन्त्रीलाई देश र जनताको हितमा काम गर्न के ले रोकेको छ ?’, देउवाले प्रश्न गरे ।
उनले ‘आफु कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुने अनि अरुलाई दो’ष थोपर्ने ? अरुमाथि दोष थुपारेर प्रधानमन्त्री भाग्न पाउनुहुन्छ ? ओली नेतृत्वको सरकार पुण अ’सफल भएको छ । छातीमा हात राखेर सोच्नुस् यो अवस्था तपाईले सिर्जना गरेको राजनीतिक अस्थिरता, दम्भ र स्वेच्छाचारिता होइन ? ’देउवाले ओलीलाई प्रश्न गरे ।
उनले कोभिडले जनता छटपटाइरहेका बेला थोरै मानिसलाई खोप दिएको भन्दै जनताको औषधिमाथि भ्र’ष्टा’चार गर्नु गै’र जिम्मेवारिताको प’रा’का’ष्ठा भएको बताए । उनले आफ्ना जनतालाई अक्सिजन व्यवस्था गर्न नसक्ने भन्दै सरकारले नै संविधान भत्काउने प्रयास गरेको वताए ।